गल्कोट हटियामा नि:शुल्क योग शिविर सन्चालन ! | ebaglung.com
गल्कोट हटियामा नि:शुल्क योग शिविर सन्चालन !
२०७५ कार्तिक १८, आईतवार ०९:४६	Top News, थप समाचार
गुमानसिँह भण्डारी, गल्कोट २०७५ कात्तिक १८ । गल्कोटमा नि:शुल्क योग शिविर सञ्चालन गरिएको छ । योग गरौं निरोग रहौं ’ भन्ने नारा सहित गल्कोट नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ हटियामा योग शिविर सञ्चालन गरिएको हो । पंतन्जली योग समिति प्रदेश नम्बर ४ को सहयोगमा हटिया स्थित महिला जागरण केन्द्रको हलमा शिबिर संचालन गरिएको हो ।
शिविरमा पतन्जली योग समिति प्रदेश नम्बर ४ का उपसंयोजक किरण भामा श्रेष्ठ र पंतन्जली योग समिति बागलुङका अध्यक्ष हिरा बहादुर केसीले जीवन उपयोगी प्रवचन सहित योग शिविर सञ्चालन गरिएको छ ।
शारीरिक एवम् मानसिक अभ्यास मार्फत शरीर, मस्तिक र हृदयको उचित समायोजन गराई व्यक्ति सम्पुर्ण रुपमा स्वस्थ्य रहन सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले शिबिर संचालन गरिएको प्रशिक्षक श्रेष्ठले बताईन् । शिविरमा गल्कोट नगरपालिका भित्रका ३० जना सहभागी भएका थिए ।
यसैबिच गल्कोट नगरपालिकामा योग शिबिरलाई निरन्तरता दिनका लागी छविलाल शर्माको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय गल्कोट पतान्जली योग समिति गठन गरिएको छ । समितीको उपाध्यक्षमा बिजुला श्रेष्ठ, सचिवमा राम बहादुर खत्री, कोषाध्यक्षमा लक्ष्मी खड्का रहेका छन् । समितिका सचिव खत्रीले दिएको जानकारी अनुसार भोलिदेखि महिला जागरण केन्द्रको भवनमा निरन्तर रुपमा योग शिविर हुने बताईएको छ ।
बागलुङबाट लगिएको ३७ किलो चरेस बुटवलमा बरामद, बागलुङका घर्ती सँगै ३ पक्राउ !